Rotokan amin'ny fanangonana
Rotokan dia natao hanasitranana ny tendany. Azo alaina amin'ny endriky ny rano fisotro madio amin'ny 50 ml vials. Azonao ampiharina eo an-toerana na ao anatiny. Ny fanafody dia avy amin'ny zavamaniry. Ampiasaina ho toy ny hemostatic, anti-inflammatory ary antiseptika izy. Ankoatr'izay, ny torolàlana dia manondro ny vokatry ny antispasmodic. Izy io dia afaka manamboatra fanimbana amin'ny fanimbana.
Rotokan - Fanadiovana ny gripa
Ny votoatin'ny zava-mahadomelina dia ahitana ny ramanavy an-tapitrisa, arivo taona sy marigold. Tokony homarihina avy hatrany fa ampiasaina ho vahaolana fotsiny izy io. Tsy tokony hampiasaina amin'ny fomba madio izy io. Vahaolana iray no atolotra avy hatrany alohan'ny fitsaboana. Ny zava-mahadomelina dia aseho amin'ny rehetra. Fa raha ny momba ny tsy fandeferana ny singa tsirairay dia matetika ny mpitsabo no manolotra fitsaboana na marary kely amin'ny zava-mahadomelina. Tsara ny manomboka amin'ny fitsaboana amin'ny ankamaroan'ny zava-mahadomelina.
Ahoana no fomba hitomboan'i Rotokan mba hitazonana azy?
rano 250 ml.
Ny rano dia tokony hohafana amin'ny 30-40 degrees ary hampiana fanafody. Atao mandritra ny 20 segondra ilay fangaro. Tsy misy na inona na inona tsy afaka mampiasa rano mafana loatra, raha tsy izany dia tsy ho very ny fanasitranany ny zava-mahadomelina.
Ho an'ny paikady, eo am-bava ny lanjan'ny roa lanjan'ny vahaolana. Ny fantsona dia vita mandritra ny iray minitra. Avy eo dia mipoaka ilay ranoka. Avereno indray ilay dingana mandra-pahavitanao ilay fitaratra miaraka amin'ilay fitambarany. Amin'ny ankapobeny dia tsy handany mihoatra ny folo minitra izany. Ny akondro dia tokony 3-4 heny isan'andro aorian'ny sakafo.
Ahoana no ahafantaranao fa rotidrotika i Rotokan mba hikorontana?
Aorian'ny fanao voalohany, ilaina ny mitandrina ny fihetsiky ny vatana. Raha ao anatin'ny ora vitsivitsy dia tsy misy ny tsy fahasalamana, dia tsara daholo ny zava-drehetra, ary mety tsara ny zava-mahadomelina. Mba hampitomboana ny vokatra ara-pahasalamana aorian'ny fomba amam-panao voalohany, dia azo ampitomboina ny doka. Azonao atao, ohatra, ny mandany roa teaspona amin'ny zava-mahadomelina amin'ny rano iray vera. Raha toa ka mandeha tsara ny zava-drehetra, dia afaka mandroso ny zava-drehetra.
Tokony hampitomboina ny dosage amin'ny andro fahatelo, fa tsy vao haingana. Ny faharetan'ny fitsaboana dia miankina amin'ny halavan'ny tenda.
Ahoana ny fampiasana an'i Rotokan hanasitrana ny ankizy?
Ny fikarakarana miaraka amin'ny vahaolana Rotocan ho an'ny ankizy dia omena amin'ny alàlan'ny fifantohana marefo - iray litatra fotsiny ny zava-mahadomelina fa rano fisotro madio. Ny zaza voalohany dia mila mifangaro kely ao am-bava ary manasa ny tenda. Ao amin'ny dingana voalohany dia tsara ny mampiasa ny antsasaky ny vera. Raha ao anatin'ny ora vitsivitsy monja aorian'ny fanariana ny zavatra rehetra dia misy ny fitsaboana azo atao. Ny faharetan'ny fianarana sy ny faharetan'ny fidirana, indray, dia miankina amin'ny dingana amin'ny aretina.
Rotokan - fomba iray hampiharana ny tenda amin'ny alèjy
Amin'ny toe-javatra sasany, amin'ny olona, ​​ny fampiasana ny zava-mahadomelina dia mety hiteraka tsy fahampian-tsakafo amin'ny endriny:
fery amin'ny hoditra;
Amin'ity tranga ity dia tsy maintsy arahanao avy hatrany ny dingana ary mifandraisa manampahaizana manokana ho an'ny fanampiana.
Ny fanafody dia azo ampiasaina mandritra ny fitondrana vohoka sy ny famitahana. Tokony hitranga anefa izany raha ny fampiharana tsotra fotsiny ny singa rehetra. Ankoatra izany, dia tian'ilay manam-pahaizana foana ny mandinika.
Rotokan amin'ny fanangonana - singa fampiharana
Aza matahotra raha toa, rehefa afaka kelikely, dia misy sedim-panafody eny amin'ny tendrony. Ilaina ny hampihorohoro ny fitoeran-drano alohan'ny fampiasana azy. Ny fitsaboana dia voatahiry ao amin'ny efitra fisakafoanana any amin'ny toerana maizimaizina tsy misy ankizy.
Rovamycin - analogues
Fanampiana voalohany ho an'ny fanapahana
Dioxydine amin'ny ampoules
Aerosol amin'ny tendany
Bronchitis miteraka - soritr'aretina
Antibiotika amin'ny andian-penisilinina
Toaka ho an'ny nono an-trano
Ny toerana tsara indrindra eto an-tany
Ahoana no hanaovana ny voaloboka ao an-trano?
Fihetseham-pahazavana tsy misy mangatsiaka
Ahoana no ahafantaranao fa tena tia anao ny olona iray?
Persimmon noho ny fahaverezan'ny fahavoazana
Fiantohana fiomanana ao amin'ny kindergarten
Evan Rachel Wood dia nihira tamin'ny fampisehoana ary nanokana ny lahateniny tamin'ny zanany lahy 4 taona
Karazana zavamaniry akondro
Aretina amin'ny fitsaboana - fitsaboana